Shirkadda Shiinaha ee sannadka cusub
Mareykanka New York New York City
Shan Shan Sano Dabbaaldega Shirkadda Farsamada Dhaqanka
Ku dabaaldeg sanadka cusub ee Lunar at Event This Annual Chinatown
Mid ka mid ah hawlaha sanadlaha ah ee Shiinaha ee soo socda ayaa ah in la soo saaro dabka saqda dhexe habeenkii si loogu dabaaldego imaatinka sanadka cusub ee Lunar. Inkastoo qaar ka mid ah dadkaan ay wali sameeyaan magaalada New York, waa sharci daro (iyo amaan) shakhsiyaadka si ay u soo saaraan rashka, sidaas darteed waxaa jira xaflad rasmi ah oo sanadle ah oo loo yaqaan 'Firecracker Ceremony & Festival Festival' oo ay qabanqaabisay hay'ado dhowr ah oo ku yaala Chinatown oo ku yaal New York.
Intaa waxaa dheer, in la dhigo gantaalada iyo rasaasta, waxaa jira qoob ka ciyaara, qoob ka ciyaarka, iyo qoob-ka-ciyaarka.
Ururo badan oo beesha ah waxay leeyihiin booths at festival, qaar ka mid ah bixinta abaalmarinta / tartamadaha iyo qaar ka iibsan alaabta Shiinaha cusub ee Chinese . Ka dib xafladda Farsamaynta, waxaa jira wafti ka socda waddooyinka Chinatown oo ka bilaabanaya Sara D. Roosevelt Park. Waa runtii xaflad xaafadeed ah oo qoysas badan oo degaanku ka qaybqaataan oo qayb ka ah (ama xitaa marqaati furan) dhacdadan gaarka ah waa xusuus.
Talo iyo Talooyin Ku Saabsan Diyaarinta
Soo qaado 11:15 aroornimo si aad u hesho goobaha ugu fiican.
Dhaqdhaqaaqa dharka - waa sahlan tahay inaad hesho meel qabow isla goobta markaad sugto in ay soo raraan kuwa dab-demiska. Febraayo waxay u egtahay inay tahay bilaw qabow oo haddii aaney qoraxdu ahayn, waa sahlan tahay in la helo boorash inta aad sugeyso ficilka la bilaabayo.
Waxaa laga yaabaa inay tagto iyada oo aan sheegin, laakiin waxaa jiri doona buuq badan iyo qiiq. Haddii aad arrin u tahay arrintan, waa inaad doorataa meel aan kuugu dhoweynin dhacdooyinka. Tani waa wax aad maskaxda ku hayso haddii aad dhacdey dhacdada carruurta - waxay noqon kartaa mid aad u xoog badan, waxaana laga yaabaa inaad iska tagto inaad baxdo haddii aad haysato ilmo yar oo aan qaban karin.
Makhaayado badan oo ku yaal Chinatown ayaa xiran Maalinta Sanadka Cusub. Haddii aad wadato wadnahaaga gaariga meel gaar ah, waa inaad horay u wacdid. Ama qorshee inaad ka soo baxdo xaafadda si cunto ah kadib. (Waxaa jira meelo badan oo aad u fiican oo aad ku cuni karto dhinaca Bariga Hoose ama xitaa SoHo mana ahan mid aad u fog in la lugeeyo.)
Siyaabo Siyaabood ah oo Loogu Qaadayo
Bandhiga waxaa lagu qabtaa Sara D. Roosevelt Park. Parkka wuxuu ka socdaa Canal ilaa East Houston inta u dhaxeysa Forsyth iyo Chrystie.
Qaado tareenka 6- aad ee Canal Street una sii wad dhinaca bari ee Canal Street Street oo ka sii gudubta Manhattan Bridge oo ka bixi bidxiga Chrystie Street. Dhacdooyinka waxaa lagu qabtaa inta u dhaxeysa Grand and Hester Streets.
Gawaarida waddada ee Chinatown waa mid aad u adag. Gaadiidka dadwaynaha ama isticmaalka garaashyada baarkinka ayaa aad loogu talinayaa.
Goorma Marka Brooklyn Barkadda Dadweynaha iyo Xeebaha u Furaan oo u Xidhaan Xilliga?
Tusaha Guide ee Williamsburg
Taariikhda Xarunta Grand Central NYC
Xagee lagu dhigan karaa New York City
Tusaha Dalxiiska ee Queens Zoo
Brooklyn Bridge Park, Hagaha booqashada ee New York's Newest Waterfront Park
Dukaamada Naqshadeynta Dharka ee Designer ee Minneapolis iyo St. Paul
London ilaa Nottingham tareen, Bus iyo Car
8ka ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Sunscreens Natural' oo lagu iibsado 2018
Soo qaado Baasaaboor
6 Waddooyin Nooc ah oo Lagu Aqoonsado Roobaha Cas
Hicksville Gregory Museum - Xarunta Sayniska Long Island Earth Earth
Tigidda Tilmaamaha dhagaxyada loogu talagalay darawallada, safarrada diyaaradaha, tareenka iyo baska
Hoteelada Dalxiis ee ugu Fiican Key West, Florida
Waxa Lagu Arko Iyo Kusa Lumpur
9 Gacanta weyn ee Qalabka ama Filinka Ocean Liner
Xarumaha Sare ee Albuquerque
Waa in la sameeyaa hawlaha Hong Kong
7 Waa in aad isku daydaa Raashinka iyo Cabitaanka Rio
Faafaahin ah Xaafadaha Longfellow Neighborhood ee South Minneapolis